March 2020 – Page 2 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Warbixin:- Kaluumeysatada Kenya oo faaiido badan ka dhaxlay faafidda Cudurka Corona.
Guud ahaan qaaradda Afrika, fayraska Corona ayaa culays ku keenay dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah, waxaana joogsaday inta badan ganacsiyada. Balse waxaa jira dad ka faa’iiday cudurkan caalamka saameeyay. Tusaale [Read More]
Biljimka oo laga helay kisas kusaabsan Coronavirus oo laga helay Gabdho Somalia ah.
Dalka Biljamka waxa uu kamid yahay Wadamada Yurub ee uu saameyhnta taban ku yeeshay Fayruska Corona, waxaana kunool ajaanib kala duwan oo ay kamid yihiin Soomaali. Wasaaradda Caafimaadka Belgium waxa [Read More]
DAAWO:- Ciidanka DFS oo Muqdisho ku dhex dilay laba Wiil dhalinyaro ah kadib dagaal kadhacay Suuqa Bakaaraha
Faah faahino dheerad ah oo ka haleyno Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay Ciidamo Boolis ah & dabley hubaysan [Read More]
DAAWO:- Duq Muqdisho oo soo saaray Awaamir culus oo qaarkood aysan awoodin Shacabka
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar filish) ayaa shir Guddoomiyay shirka Todobaadlaha ee Maamulka Gobolka Banaadir, kaasi oo ka dhacay xarunta Degmada Shangaani. Shirkaan oo ay [Read More]
Somalidii ugu badnayd oo lagu xidhxdihay Dalka Koonfur africa kadib markii ay Jebiyeen…
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ay xireen dada ay ku jiraan Soomaali,kuwaas oo fulin waayay Amar kasoo baxay Madaxweynaha dalkaas ee ku saabsan ka hortaga [Read More]
March 30, 2020 Ali Osman 0
Puntland oo soo saartay in kabadan 10Qodob oo looga hadlayo kahortagga COVID-19 + Bandow lagu soo rogay dhamaan gobollada.
Xukuumadda Puntland ayaa si rasmiya ugu dhawaaqday, in gebi ahaanba bandow lagu soo rogay isu-socodka dadka iyo gaadiidka dhammaan magaalooyinka Puntland, laga bilaabo lixda makhribnimo ilaa iyo shanta subaxnimo ee [Read More]
DEG DEG:Dad Hargeysa ka Yimi oo laga Helay Xanuunka Coronavirus.
March 29, 2020 marqaan 0
Jabuuti ayaa Axada maanta ah heshay kiisas cusub oo Coronavirus ah, sidda uu baahiyey Telefishinka ku hadla afka dowlada. Sidda ku xusan warbixinada, kiisaska cusub ee la xaqiijiyey ayaa gaaraya [Read More]
DEG DEG:Qarax Ismiidaamin Garoowe Ka Dhacay Iyo Qasaaraha Ka Dashay
March 29, 2020 marqaan 8
Qof ismiidamiyey ayaa isku Qarxiyey Gaari ay saarnaayeen Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gujir) iyo Taliyihii hore qaybta booliska gobolka Nugaal Faarax Galangooli. Wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Puntland [Read More]
DAAWO:- Degdeg:- Puntland oo ka hadashay Qaraxii ismiidaaminta ee caawa kadhacay Garoowe + Khasaaraha lahubo
Qof ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey Gaariga gudoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Gujir iyo Taliyihii hore ee qaybta Booliska gobolka Nugaal Faarax Galangooli oo gaariga la saarnaa iyo masuuliyiin ka tirsan [Read More]
Degdeg:- Qarax Ismiidaamin ah oo gowrdhow ka dhacay Garoowe + Masuuliyiin ku dhaawacantay.
sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Garoowe ee Caasimadda Puntland, waxaa goordhow magaaladaasi ka dhacay qarax dhawaqiisa laga maqlay inta badana Xaafadaha magaalada. Qof ismiidamiyey ayaa isku Qarxiyey [Read More]
Maydka Nin loo maleeynayo in la dilay ayaa laga helay mid kamid ah xeebaha Muqdisho.
Maydka nin ay badda soo tuftay ayaa laga helay Xeebta Muqdisho Duhurnimadii maanta oo Axad ah sida ay Mustaqbal u sheegeen goobjoogayaal ku sugan Magaaladda Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya . [Read More]
DAAWO:- Puntland oo kahadshay qofkii karantiilka kujiray ee Shalay ku dhintay Garoowe.
Puntland ayaa sheegtay ilaa iyo hadda aysan Puntland ka jirin kiisas la xiriira Cudurka Coronavirus (COVID-19). Warsaxafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa lagu xaqiijiyay in degaamadda Puntland uusan [Read More]
DAAWO VIDEO:Khilaaf Ka Dhex Abuurmay Somaliya iyo Masar Kadib tageerada Dowlada Faderalka Itoobiya U Leexatay
March 29, 2020 marqaan 2
Dhawaan waxaa magaalada Qaahira ku shiray dalalka Carabta waxaana ay soo saareen go’aan ay ku taageerayaan mawqifka Masar ee ku saabsan biyo xidheenka “Horukac” ee dalka Itoobiya laga hir gelinayo, [Read More]
DAAWO VIDEO:Wariye Eglan Iyo Wariye Bushaaro Baande oo London oo Wadooyinka Cidlo Sheeko Ka Sameeyey
Qof loo maleenayo inuu qabay CORONAVIRUS oo ku dhintay Magaalada Garoowe.
Waxaa maanta magaalada Garowe lagu aasay qof kamid ahaa dadkii looga shakisanaa cudurka Coronavirus, kaasoo xalay ku geeriyooday xarun lagu karantiilo dadka laga helo calaamadaha cudurka oo dhawaan laga hirgaliyay [Read More]